Announcement | The World of Pinkgold
Posted on November 6, 2009 by cuttiepinkgold
မြန်မာတွေအားလုံးအတွက် ကဏ္ဍအားလုံးကို စုံအောင်တင်ဆက်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ All Channel မှ မြန်မာတွေကိုသာမက ၊ တစ်ခြားနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပါ ခံတွင်းမြိန်မြိန်စားသောက်စေနိုင်ဖို့ အရသာရှိတဲ့ ဟင်းလျာတွေကို ဘယ်လိုချက်ရမယ်ဆိုတဲ့ Recipe ကဏ္ဍကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြန်ပါပြီး။
အဟာရ နှင့် ကျန်းမာရေး
အစရှိတဲ့ ဟင်းလျာမျိုးစုံရဲ့ ချက်နည်းပြုတ်နည်းတွေကို စုံလင်စွာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အချက်အပြုတ်ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေလည်း သွားရောက်လေ့လာ သင်ယူနိုင်တဲ့ ဆိုဒ်လေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ All Channel Recipe ကဏ္ဍလေးမှာ ဘယ်လိုဟင်းချက်နည်းတွေကို တွေ့နိုင်တယ်၊ ဘာတွေကို ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ပဲ သွားရောက်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါတော့ရှင်။
Filed under Announcement and tagged recipe |	2 Comments
Good News for Every Bloggers and Online Writers
Posted on November 5, 2009 by cuttiepinkgold
တစ်ခါတုန်းက ကျွန်မရေးခဲ့ဖူးတဲ့ လက်ကိုင်နည်းဆယ်ချက် ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကို နိုဝင်ဘာလထုတ် People Magazine မှာ မြင်တွေ့ခွင့် ရလာပါပြီ။ ကျွန်မရဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖော်ပြပေးကြသော People Magazine မှ အယ်ဒီတာများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ ပြောပါရစေရှင်။
မြန်မာ People Magazine ကနေ What’s hot online? ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍလေးကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာ အတော်လေးတော့ ကြာခဲ့ပါပြီရှင်။ ကျွန်မသတိထားမိသလောက် အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတွေ၊ မှတ်သားစရာလေးတွေကို Print Media ကို ဖတ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေကို ပြန်လည်ဝေငှပေးတဲ့ သဘောပါ။ အရင်တုန်းကတော့ အီမေလ်းတွေကနေ အဆင့်ဆင့် Forward လုပ်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေဟာ People ရဲ့ စာမျက်နှာထက်ကို ရောက်ရောက်လာတတ်ကြပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အယ်ဒီတာတွေကလည်း သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ စာလေးတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပြီး စာရေးသူကိုသိရင် အမည်ဖော်ပြပေးကြသလို ၊ source လိုက်လို့ မရခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း အင်တာနက်မှ အမည်မသိကလောင်ရှင်များကို ဂုဏ်ပြုတင်ဆက်ပါသည် ဆိုပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မနိုင်းနိုင်းစနေ ၊ မရွှေပြည်သူ ၊ မအိမ့်ချမ်းမြေ့ ၊ ကိုပီကေ အစရှိတဲ့ ဘလောဂ့်ဂါတွေရဲ့ စာတော်တော်များများကိုလည်း တင်ဆက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Print Media တစ်စောင် အနေနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကစာတွေကို ကူးယူဖော်ပြတဲ့အတွက် ဝေဖန်မှုဒဏ်တော်တော်များများကိုလည်း People Magazine အနေနဲ့ ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အယ်ဒီတာတွေအနေနဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကိုကြိုက်ရင် အင်တာနက်ထဲမှာ စာရေးသူကို မရ ရအောင်ရှာပြီး credit ပေးသလို ၊ လုံးဝ ရှာလို့ မရခဲ့ရင်လည်း အင်တာနက်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်ဆိုတာလေးကို အမြဲထည့်ပေးပါတယ်။ People ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာအဖြစ်နဲ့တော့ ဘယ်တုန်းကမှ မဖော်ပြခဲ့ဖူးတာကိုတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင် သတိထားမိနေပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှာ စာရေးနေကြတဲ့ ၀ါသနာရှင်တွေကလည်း မိမိတို့ရဲ့ စာမူတွေကို ဒီကဏ္ဍလေးသို့ ပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။ people.online@inforithm-maze.com ကို အီးမေလ်းပို့ပြီး မိမိတို့ရေးသားထားတဲ့ စာတွေကို ပို့နိုင်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဘလောဂ့်ဂါအပေါင်းနဲ့ တစ်ခြား အွန်လိုင်းပေါ်မှ စာရေးသူများကို သတင်းကောင်းလေး ပါးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ ကိုယ့်ရဲ့ စာမူတွေကို စာမျက်နှာထက်မှာ မြင်တွေ့ခွင့်ရမယ့် အခွင့်အရေးဖြစ်လို့ မသိလိုက်ရ မဖြစ်လေအောင် ပိုစ့်ရေးပြီး တင်လိုက်ရကြောင်းပါရှင်။
Filed under Announcement |	10 Comments
Posted on June 18, 2009 by cuttiepinkgold
ကျွန်မရဲ့ ရင်ကွဲနာဆိုတဲ့ ၀တ္ထုလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျေးဇူးတင်စရာ ၀န်ခံစရာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီဝတ္ထုလေးက ကျွန်မ ရေးခဲ့သမျှ အချစ်ဝတ္ထုတွေထဲမှာ အပေါက်ဆုံးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ လူတော်တော်များများ အားပေးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် နည်းနည်းတော့ လက်ရည်တက်လာတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ အချစ်ဝတ္ထု ထပ်ရေးဖြစ်ရင်တောင် ဒီလောက် ကောင်းနိုင်ပါတော့မလား မသိဘူး။
ဒီ ၀တ္ထုလေးဟာ တစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို အခြေခံပြီး ဇာတ်အိမ်တည်ထားပေမယ့် ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ကို ၀တ္ထုလို့ပဲ ခံစားပြီး ဖတ်စေချင်ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မ သုံးထားတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးတွေထဲမှာ ကျွန်မအရမ်းနှစ်သက်တဲ့ စာရေးဆရာမ ဂျူးရဲ့ စာသားတွေကို ယူသုံးထားမိပါတယ်ဆိုတာ ၀န်ခံပါရစေ။ ကျွန်မ အမှတ်ရနေပြီး ယူသုံးခဲ့မိတာတွေကတော့…အပိုင်း (2) ထဲမှာပါတဲ့
ကျွန်မ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲတွင် ဖတ်ဖူးသည်။ မရင့်ကျက်သော သူများအတွက် အချစ်ဆိုသည်မှာ လိုအပ်ချက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရင့်ကျက်သောသူများအတွက် အချစ်ဆိုသောအရာသည် အချစ်ပင် ဖြစ်တော့သည်တဲ့။
ကျွန်မ ချစ်သော အချစ်သည် အတွေ့အထိကင်းသော အငွေ့သက်သက်သာ ဖြစ်သည်။
အပိုင်း (၁) ထဲမှာပါတဲ့ စွန်ကလေးနဲ့ ပေးတဲ့ ဥပမာကတော့ ဘုန်းဘုန်းဦးကုမာရက ကျွန်မကို ဆုံးမသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းပြောခဲ့တဲ့ စကားကိုလည်း ထည့်ရေးခဲ့တယ်ဆိုတာ ၀န်ခံရင်း ဘုန်းဘုန်းကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။
လေထဲမှာ ပျံနေတဲ့ စွန်ကလေးတွေဟာ.. ရစ်လုံးကနေ ကြိုးနဲ့ထိန်းထားရက်နဲ့တောင် ဘယ်ဘက်ကိုယိမ်းလိုက်၊ ညာဘက်ကိုယိမ်းလိုက်နဲ့ လေနှင်ရာကို လိုက်ပါနေကြတယ်။ ရစ်လုံးနဲ့ အဝေးမှာရှိနေခိုက် သူတို့ ယိမ်းချင်ရာဘက်ကို ယိမ်းနေကြတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ရစ်လုံးဆီကို တစ်ဖြည်းဖြည်းပြန်ရောက်လာရတာပဲ။
ကျွန်မကို ကွန်းမန့်တွေရေးပြီး အားပေးခဲ့ကြသော စာဖတ်ပရိတ်သတ်များနှင့် facebook မှ သူငယ်ချင်းများ၊ public comments များကိုသာမက အီမေလ်းပို့ပြီး private comments များဖြင့် အားပေးခဲ့ကြသူများ၊ severe response ပေးကြသူများ၊ ဝေဖန်အကြံပြုပေးကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်ရှင်။
ကျွန်မဒီဝတ္ထုကို ဘာကြောင့်ရေးဖို့ စဉ်းစားခဲ့တာလဲ ဆိုရင်. သိပ်ချစ်တတ်သွားရင် သိပ်ခံစားတတ်ကြတယ် ဆိုတာပြချင်လို့ပါပဲ။ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ယောက်ျားဖြစ်စေ ပုံအပ်ပြီး မယုံကြည်သင့်ကြဘူးဆိုတာကို ကျွန်မရဲ့ အဖြစ်နဲ့ယှဉ်ပြီး သင်ခန်းစာ ယူတတ်စေချင်လို့ ဆိုရင် ကျွန်မစကားတွေ အရမ်းကြီးကျယ်သွားမှာလည်း စိုးရပါသေးတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အချစ်စစ်ကို တွေ့နိုင်သလို၊ အလိမ်အညာများလည်း ရှိပါတယ်ဆိုတာကို လူတိုင်း သိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် ပိုသတိထားမိကြအောင် ချပြချင်တာမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မည့်သူ့ကိုမျှ ထိခိုက်ရန် မရည်ရွယ်ခဲ့ပါ။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါသည်။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိကလည်း ခွင့်လွတ်ပေးကြပါလို့ ပြောလိုပါတယ်ရှင်။
Filed under Announcement |	7 Comments
Posted on January 20, 2009 by cuttiepinkgold
Blogspot မှာရေးရတာ မလွယ်တာကတော့ တော်တော်ကြာပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် သံယောဇဉ် ရှိရင်းစွဲကြောင့် ပရောက်ဆီလေး ကျော်လိုက်၊ mail to blogger နဲ့ ပိုစ့်တင်လိုက် နဲ့ပဲ ရေးလာခဲ့လိုက်တာ သက်တမ်းတောင် တစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ပိုစ့်တင်ရတာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတော့ဘူးရှင့်။ Ultrasurf က ပိုစ့်တင်လို့ မရတော့ဘူး။ တစ်ခြား Proxy Software တွေလည်း အဆင်မပြေဘူး။ အဲဒီတော့ ဘလောဂ့်ရွှေ့ဖို့ စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ Free Hosting တွေဘာတွေအကြောင်းကို မလေ့လာရသေးတာနဲ့ ရိုးရိုး wordpress.com မှာပဲ ရေးနေလိုက်ပါအုံးမယ်။ ရှိပြီးသား domain ကိုလည်း ဒီမှာပဲ Redirect လုပ်ပါမယ်။ ဟိုဘက်က blogspot ကိုတော့ အရင်အတိုင်းပဲ http://cuttiepinkgold.blogspot.com လိပ်စာနဲ့ ထားခဲ့ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဘက်က ဒိုမိန်းကို ဖြုတ်ဖို့အတွက် setting ထဲကို ၀င်လို့ မရသေးဘူး။ ရပြန်တော့လည်း save လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကျေးဇူးရှင် ultrasurf က error ပြတယ်။ နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းပြီး ဖြုတ်ခိုင်းပြီးတာနဲ့ ဒီဘလောဂ့်ကို http://www.cuttiepinkgold.info နဲ့လာရင် ရောက်အောင် လုပ်ပါမယ်။ အဆင်မပြေတာလေးများ ရှိခဲ့ရင်တော့ သည်းခံကြစေချင်ပါတယ်။
မေးသမျှကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှင်းပြပေးတဲ့ ကိုသင်္ကြန်ကို ကျေးဇူးသိပ်တင်ပါတယ်။
Arakan Online Social Network
Posted on June 27, 2008 by cuttiepinkgold
ရခိုင်လူမျိုးဆိုတာ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ကိုယ့်ထီး၊ ကိုယ့်နန်း၊ ကိုယ့်ကြငန်းနဲ့ တင့်တင့်တယ်တယ် နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေပါ။ ရာဇ၀င်တွေကို ပြန်လှန်ကြည့်မလား… အိမ်ကြီးရခိုင်ရယ်လို့ နာမည်တွင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်း အများထက်သာခဲ့တဲ့ သူတွေပါ။ ရှေးရခိုင်တွေရဲ့ သမိုင်းဟာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီး ဘယ်နိုင်ငံကမှ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို မခံခဲ့ရသလို၊ ဘယ်နိုင်ငံကိုမှလည်း ကျူးကျော်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့တဲ့အတွက် မြင့်မြတ်သော လူမျိုးများလို့တောင် တင်စားလိုက်ချင်ပါရဲ့ရှင်။ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ညီတော်ရယ်လို့ ခံယူတော် မူခဲ့တဲ့ ရခိုင်ဘုရင် စန္ဒာသူရိယရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ကိုယ်ငွေ့တော်သွင်းပြီး ထုလုပ်ခဲ့တဲ့ မဟာမုနိဘုရား ဆိုတာတောင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ခန့်ခန့်ထည်ထည်ကြီး ရှိသေးတယ် မဟုတ်ပါလား။ သဇင်ပန်းခိုင် တစ်မြိုင်မြိုင် ရခိုင်ဘုရားပေါင်း ရယ်လို့ ခေါ်တွင်ခြင်းခံခဲ့ရခြင်းဟာလည်း ရခိုင်တွေရဲ့ ဘာသာ သာသနာကို ရိုသေလေးမြတ်မှု တွေကိုအထင်အရှား တွေ့မြင်နိုင်တယ်လေ။
သမိုင်းအစဉ်အလာ ကြီးမားခဲ့တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ အစဉ်အဆက်တိုင်းမှာ အမျိုးကိုချစ်မြတ်နိုးစွာနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံးနေလာခဲ့ကြတာ ယနေ့တိုင်ပဲ မဟုတ်ပါလားရှင်။ လေးကျွန်းဝတီ (ဓည၀တီ၊ ဒွာရာဝတီ၊ ရမ္မာဝတီ၊ မေဃ၀တီ) နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကျွန်မတို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ခုချိန်မှာလည်း စည်စည်ပင်ပင်နဲ့ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အချက်အချာတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေပါသေးတယ်။ ရခိုင်သူ၊ ရခိုင်သား အပေါင်းဟာလည်း ရက္ခိတ လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးကိုချစ်သော စိတ်ဓါတ်နဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကောင်းစားရေးအတွက် တစ်ဘက်တစ်လမ်းကနေ ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ သူတွေပါ။
မိနဲ့ ဖနဲ့ မခွဲမခွာ ချစ်ခင်စွာ နေထိုင်နိုင်ကြတဲ့ သူတွေရှိသလို၊ မိဝေး ဖဝေးမှာ ဘ၀အတွက် ရုန်းနေရသူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါရှင်။ ရခိုင်မောင်နှမ သွေးချင်းတွေ စုစည်း ဆုံစည်းဖို့ ဆိုတာ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အိပ်မက်အလား ဝေးကွာလွန်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ အိုင်တီ ခေတ်ကြီးမှာ နည်းပညာတွေ ပေါင်းစပ်၊ ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ အသစ်ထွင်ပြီး ရခိုင်မောင်နှမတွေ ဆုံစည်းဖို့ နေရာလေး တစ်နေရာကို ရခိုင်လူမျိုး Web Developer တစ်ယောက်က တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဖ ရခိုင်သားရို့ ရွာ… ဆိုတဲ့ Online Community လေးဟာ ရခိုင်သားချင်းများ လွပ်လွပ်လပ်လပ် ဆုံစည်းနိုင်ပြီး ခံစားချက် အတွေးအမြင်တွေကို ဖလှယ်ဖို့ ဖန်တီးထားတဲ့ နေရာလေးပါ။ တစ်ခြား နာမည်ကြီး Online Portal တွေလိုပဲ Forum, Photo, Webpage, Group, Video စတဲ့ ရခိုင်းသားများရဲ့ လက်ရာတွေကို ဝေငှလို့လည်း ရပါသေးတယ်။ ရခိုင်သားတွေပဲ သုံးမှာလား လို့မေးစရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့် လူမျိုးတိုင်းကို ချစ်ခင်တတ်တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ ဖြစ်တာမို့ တစ်ခြား မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း မောင်နှမ တွေကိုလည်း ရခိုင်ရွာ ကိုလာရောက်ဖို့ နွေးထွေးလက်နဲ့ ကြိုနေမှာပေါ့ရှင်။
ရခိုင်တွေ စုစည်းပြီး တစ်မျိုးသားလုံးနဲ့ ချစ်ခင်မှုကို တည်ဆောက်မယ့် အဖရခိုင်သားရို့ ရွာ ကို တစ်ခေါက်လောက်တော့ သွားရောက်ဖို့ တိုက်တွန်း ပါရစေ။
Filed under Announcement |	1 Comment